I-East Lake Travelveller 's Lodge - Ikamelo elilala abantu ababili noma ababili - I-Airbnb
I-East Lake Travelveller 's Lodge - Ikamelo elilala abantu ababili noma ababili
Ikamelo e-ihostela ibungazwe ngu-Fen
I-East Lake Travelers Lodge yenza isisekelo esifanelekile sohambo lwakho lwe-Snowy Mountains. Uma ufuna indawo yokuhlala ehlanzekile, eshibhile futhi ejabulisayo endaweni yaseJindabyne, ungabe usabheka okunye.
Sifuna i-East Lake Travelers Lodge ibe yikhaya lakho kude nasekhaya. Siyazi ukubaluleka kweshawa eshisayo kanye nombhede othokomele (ikakhulukazi ngemva kosuku olude lokuhlola amagquma). Zonke izihambeli zethu ziyakwazi ukufinyelela enhliziyweni ye-East Lake.
Pls bhukha ngokuqondile uma ufuna ukuletha isilwane sakho (futhi kuyindlela eshibhe kakhulu).
Ukulala kwegumbi lethu lokuhlala ngendlela engu-2 njengombhede wenkosi noma ongashadile oyedwa, olungele izithandani noma abangane bomshado abahamba phambili! Ezingu-8 sezizonke, ikamelo ngalinye lifaka indawo yokugezela encane ene-ensuite, i-TV, ifriji nekhofi netiye, amanye anovulandi obheke echibini. Umsebenzi we-balcony ngesisekelo sokuza kuqala.
Ngenkathi amagumbi ethu esohlangothini oluncane, ayakwazi ukufinyelela ekhishini elikhulu elihlanganyelwe/indawo yokuhlala/yokudlela enendawo yomlilo evulekile, inala yemidlalo yamabhodi kanye negumbi lokuphumula elithokomele lokuziphumuza nokuzijabulisa- ngokuqhelelana okufanele komphakathi kunjalo!
Futhi sinendawo ye-BBQ yangaphandle nendawo yokucima umlilo, elungele ubhiya we-arvo njengoba ilanga lishona!
** SICELA UQAPHELE UKUTHI ASINAWO AMA-AIR CON**
Njengoba sisezintabeni zase-East Jindabyne, ngaphandle kwesiphithiphithi sedolobha, sinezidingo eziyisisekelo njengesiteshi sesevisi, ikhefi kanye nesitolo samabhodlela.
Sihamba ibangana nje ukuya eLake Jindabyne futhi siyimizuzu eyi-7 kuphela ukuya enkabeni yedolobha laseJindabyne. Lapho uzothola amabhikawozi akho, amabhusha, ama-pubs, kanye nezinsiza zohambo.
Zizwe ukhululekile ukukhetha ubuchopho bethu kunoma imaphi amathiphu noma amacebo ongathanda ukuwazi.
Nakuba ngingahlali esizeni, ngihlala ngitholakala nge-VIA call noma umbhalo. Umnakekeli wethu u-Josh naye uhlala esizeni futhi uhlala ejabule ukuboleka isandla noma indlebe.